Qaramada Midoobay oo sheegtay in colaada Gaalkacyo ay ku barakaceen 50,000 oo qof - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandQaramada Midoobay oo sheegtay in colaada Gaalkacyo ay ku barakaceen 50,000 oo qof
Baabuur sida dad ku barakacay dagaalka Gaalkacyo. [Sawirka: Archive]
Gaalkacyo(Puntland Mirror) Ku dhawaad 50,000 oo qof ayaa ku barakacay dagaalada u dhaxeeya dowlada Puntland iyo maamulka Galmudug ee Gaalkacyo, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay shalay oo Jimce ahayd.
“Dadka ka shaqeeya insaanimada waxay ku qiyaaseen 50,000 oo qof in ay ku barakaceen, 60 boqolkiiba waa dad barakacayaal ah kuwaasoo barakac labaad ku dhacay. Haayadaha ka shaqeeya insaanimada waxay kusoo warameen in dadka shacabka ah intiisa badan ee ka barakacay dhanka koonfurta Gaalkacyo ay u carareen qaybo kamid ah koonfurta Mudug iyo Galgaduud, halka kuwa waqooyiga Gaalkacyo ka barakacay ay u carareen deegaano kuyaala waqooyiga Mudug iyo Nugaal.” haayada Qaramada Midoobay ee xiriirka arrimaha insaanimada ayaa sidaa ku sheegtay bayaan.
Bayaanka haayada Qaramada Midoobay ee xiriirka arrimaha insaanimada (UNOCHA) ayaa lagu sheegay in 11 qof lagu dilay dagaalka ilaa iyo hadda, iyadoo laga soo xigtay saraakiil maxali ah.
November 12, 2016 Gaas iyo Guuleed oo ku kulmi doona Gaalkacyo si ay uga wadahadlaan joojinta dagaalka Gaalkacyo
Eritrea said more than 200 Ethiopian troops were killed in June 12 clashes on their joint border, the latest in a series on confrontations since the Horn of Africa nations separated more than two decades [...]
Garowe-(Puntland) 18 rape cases happened in Puntland for the last three months, the region’s acting attorney general told to the media Tuesday in Garowe. Mohamed Farah Hared, who is the acting officer of the attorney [...]